Fitondrana hafanana mahery vaika amin'ny alàlan'ny herinaratra mahery vaika Nylon voalohany - Shenzhen Dengfeng Power Co., Ltd.
an-trano > Vaovao momba ny indostria > Fitondra-tena mahery vaika amin'ny herin'ny herinaratra mahery vaika Ny Nylon voalohany
Fitondra-tena mahery vaika amin'ny herin'ny herinaratra mahery vaika Ny Nylon voalohany
Ny rafitra fanamafisana jiro dia mampiasa aliminioma ho fitaovana. Noho ny fitondra hafanana ambany amin'ny plastika dia tsy mahafeno ny fepetra takiana, tsy azo ampiasaina amin'ny sehatry ny LED termal. Vao tsy ela akory izay, ny orinasa DSM dia mamoaka karazana plastika conductive vaovao, mitazona hatrany ny tombony amin'ny ankapobeny ny akora plastika, ny fitomboan'ny coefficient ny conductivity mafana, ny coefficient ny conductivity mafana amin'ny plastika 10-50.
Teo ambanin'ny ezaky ny Philips sy ny DSM, ny jiro vaovao Philips MASTERLEDMR16 no nanjary fampiharana voalohany an'ny herin'aratra mahery vaika eran'izao tontolo izao, ny akorany vita amin'ny aliminioma dia nosoloina fitaritana hafanana StanylTC plastika. Stanyl dia manatsara ny famolavolana endrika sy ny faharetan'ny vokatra, ary koa ny fampihenana ny lanjan'ny vokatra sy ny tombontsoa maro hafa. Ny faharetan'ny vahaolana amin'ny ho avy dia hampiharina amin'ny andian-jiro LED vaovao Philips iray manontolo.
Philips MASTERLEDMR16 dia jiro LED 4 watt afaka misolo ny jiro halogène haavo kely misy ankehitriny. Ny hazavana avoakany miaraka amin'ny jiro halogen MR16 20 Watt, noho izany, io no tombony lehibe indrindra manangona ny angovo hatramin'ny 80 sy 40 heny noho ny androm-piainan'ny jiro halogen.
Ireo fitaovana metaly toy ny teknolojian'ny rafitra termal dia efa matotra, saingy mbola misy lesoka ihany koa, ny fitaovana fitondra amin'ny alikaola vita amin'ny plastika vy dia manana tombony maro, toy ny lanjany ambany, fiarovana sy fiarovana ny tontolo iainana, fanatsarana fahalalahana amin'ny famolavolana, fanodinana mora, fahombiazana avo kokoa, atombohy ny rafitra sy ny sisa.
:Fahazoan-dàlana amin'ny jiro LED jiro efatra